नेकपा एकता ढिलाइले नयाँ पुस्तामा क्षति: नेत्री बराल
सुरज डिजी खनाल आइतबार, माघ २७, २०७५
काठमाडौँ, २७ माघ – नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमि बोकेको ऐतिहासिक जिल्ला हो झापा। ०२८ सालको ‘झापा विद्रोह’ नेपाली राजनीतिमा चर्चा गरिनेमध्येको एक आन्दोलन हो। अर्को शब्दमा भन्दा यो झापा विद्रोहलाई ‘वर्ग शत्रु सफाया’ आन्दोलनको नाममा लिने गरिन्छ।
आज मूल धारको राजनीतिमा मात्रै नभएर नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि झापाका युवा नेताहरू अग्रपंक्तिमा भेटिन्छन्। यसरी विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेर राष्ट्रिय परिचय बनाउन सफल एक जना युवा नेत्री हुन् – सुनिता बराल। अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष बराल झापाको गौरादहमा जन्मेकी हुन्।
विसं २०४५ वैशाख ३० गते बुवा खगेन्द्रप्रसाद बराल र आमा सारदा बरालको कोखबाट जन्मिएकी बराल अनेरास्ववियुको आगामी अध्यक्षका लागि जोडबलले लागि परेकी छन्।
नेपाली पब्लिकसँगको कुराकानीमा बराल भन्छिन्, ‘आगामी अनेरास्ववियुको नेतृत्व लिन म तयार छु। जिल्लादेखि, अनेरास्ववियुको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा मैले नेतृत्व पाउनु पर्छ भन्ने मेरो दाबी हो।’
अनेरा स्ववियुको नेतृत्व नपाएको खण्डमामा आफूलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने बताईन । उनले भनिन्,‘मेरो सम्भावना प्रवल छ, म संगठनलाई कुशलता पूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छु, संगठनलाई समय सापेक्ष बनाउने मेरो पहिलो लक्ष्य हो।’
विद्यार्थी आन्दोलन सत्तापक्ष हो या प्रतिपक्ष ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा बरालले भनिन्, ‘नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई जनताको जीवनसँग जोड्नु पर्छ। पुरानो ढर्राको विद्यार्थी आन्दोलनले मुलुकलाई उचित योगदान दिन सक्दैन। त्यसलाई बदल्नु पर्छ भन्नेमा म जोडका साथ लागिरहेकी छु। विद्यार्थी आन्दोलन मूलतः प्रतिपक्ष नै हो । सत्तापक्षका राम्रा कुरालाई सञ्चार गर्नु र गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नु विद्यार्थी आन्दोलनको मूल धर्म हो।’
उनले भनिन्, ‘अनेरा स्ववियु आफैमा आन्दोलन हो। हाम्रो संगठन चेतनशील र नेतृत्वदायी संगठन हो । त्यसैले एजेण्डाको आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध हुन्छ। अनेरास्ववियुले प्रतिपक्षी भूमिकाको लागि कुन पार्टीले सरकार चलाएको छ ? भनेर हेर्दैन।’
‘विद्यार्थी संगठनका नेताहरू ठेक्कापट्टामा’
पछिल्लो समय यूवा राजनीतिक संगठनहरु उनीहरुले बोकेको विचार भन्दा बाहिर जान थालेका छन् । पद ओगटेर बस्ने तर अर्को तर्फ फरक ढंगले पैसा कमाउनेमा यूवा नेताहरु लागि रहेको देखिन्छन्।
यस सन्दर्भका बारेमा बरालले भनिन्, ‘केही सत्यता पनि छ, म झूटको राजनीति गर्न चाहन्नँ, केही साथीहरू फरक बाटोमा लाग्नुभएको सत्य हो, त्यसमा पनि विद्यार्थी संगठनभन्दा पनि युवा संगठनका नेताहरू बढी छन् भन्ने सुनिँदैछ, व्यवसाय आफैमा गलत हुँदैन, त्यसलाई मुलुक र जनतासँग जोडुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ, विद्यार्थी आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत कसैले पनि जानु हुँदैन, विद्यार्थी आन्दोलनलाई विचलित बनाउन कोही लाग्छ भने त्यो स्वीकार्य पनि छैन।’
नेत्री बरालले सरकारका क्रियाकलाप सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले केही गर्दैछ, गरिरहेको छ, गर्ने कोसिसमा छ, यो सत्य होला तर जनताले महसूस गर्ने गरी परिणामको अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, सरकारले केही राम्रा कामको शूरुआत पनि गरेको छ।’
संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको नेकपा सरकारले समान रूपमा योजना वितरण गरेको छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुनुपर्छ, नत्र प्राप्त उपलब्धि गुम्छन्, शून्यमा झर्न सक्छन्, मेरो जिल्ला, तपाईंको जिल्ला, अरू कुनै नेताको जिल्ला भनेर विकासका योजना बाँड्नु हुँदैन, यसरी विभेदपूर्ण ढङ्गले विकासका योजनाहरू वितरण गरिनु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको गृह जिल्लामा धेरै योजनाहरु थुपारिएका छन् भन्ने आरोपलाई उनले अस्विकार गरेकी छन् । उनले भनिन्,‘संघीयताको मर्म अनुसार सरकारले काम गर्नुपर्छ, योजनाहरु थुपारिएका हुन या होइनन् ? मलाई विस्तृत जानकारी त भएन । उहाँहरू झापा र चितवनको मात्रै नेता होइन त्यसैले देशभर ध्यान दिनुपर्छ र दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
नेकपा एकता ढिलाइले नयाँ पुस्तालाई क्षति
बरालले नेकपाको एकता प्रक्रिया ढिलाई हुनुले अनेरास्ववियुलाई नभएर नयाँ पुस्ताको राजनीतिक भविष्यमाथि क्षति पुगेको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘अनेरास्ववियु सबैभन्दा गतिशील संगठन हुनुको नाताले यहाँ नेतृत्व विकास र राजनीतिप्रति चासो राख्ने विद्यार्थीले अध्ययनको एक तह पार गर्ने समय बित्न लाग्दा समेत नेकपा एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्नुले समग्र संगठन र नेपाली राजनीतिको नयाँ पुस्तालाई नै क्षति भएको छ।’
उनले नेकपाको एकता प्रक्रिया अनिश्चित होइन, ढिला भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले भनिन्,‘नेतृत्वले एकतालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि तोकिएको समय पर धकेलिएको छ, यति समय लगाउनु हुँदैनथ्यो । यसले अनेरास्ववियुमा स्वभाविक रुपमा असर परेको छ, गतिशिल संगठन र नेता कार्यकर्ताहरुको समय निक्कै महत्वपूर्ण छ।’
उनले दुई विद्यार्थी संगठनका बीचमा एकताको लागि प्रयास भइरहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्,‘हाम्रो बीचमा कुनै प्रकारको मत विभिन्नता छैन। पार्टी नेतृत्व एक छ । हामीबीच नेतृत्व मात्रै फरक हो। एकल कार्यक्रमहरु नभएका मात्रै हुन। दुई विद्यार्थी संगठनको एकतापछि आगामी नेतृत्व न्यायिक ढंगले चयन हुने कुरामा म विश्वस्त छु।
नेकपा एकताका लागि अध्यक्ष ओली–प्रचण्डसहित सचिवालय सदस्य, स्थायी समिति सदस्यहरूको नेतृत्वमा कार्यदल बने पनि कार्य एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २७, २०७५ १३:३९
सोमबार, वैशाख २७, २०७८ १५:०१ प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको प्रश्न, ‘आफू कार्यकारी प्रमुख हुने अनि अरुमाथि दोष थोपर्ने?’